Dhuusamareeb: Itoobiyaanka Oo Amniga La Wareegay iyo Villa Somalia oo Siyaasadda Ah – Goobjoog News
Wararkii ugu dambeeyey ee ay Goobjoog News ka hesho magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa sheegaya in shalay ay magaalada soo gaareen ciidamo Itoobiyaan oo xoojinaya qaar isla dalkaasi ah oo horay u sii joogay.
Weriyaha Goobjoog News ee gobolka ayaa sheegaya in Itoobiyaanku ku yimaadeen ilaa 6 gaari, mid booyad ah , 2 gaari oo saadka ah iyo 2 kale Uuraal ah, kuwaas oo ujeedkoodu yahay xoojinta ciidamada Itoobiya ee saldhigga ku leh xarunta Dhuusamareeb.
Ilo kala duwan ayaa sidoo kale noo sheegay in Xabashida ay la wareegeen goobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin garoonka iyo xarumo kale oo ay joogaan dowladda federaalka ah.
Mas’uul ka tirsan Ahlu sunna oo codsaday in magaciisa aan la xusin ayaa Goobjoog News u sheegay in Itoobiyaanka ay ogyihiin cidda waxtarka u leh iyaga iyo DF isaga oo intaasi ku daray in 12 sano ay Ahlu sunna ka difaaceysay Adis Ababa kooxda Al-shabaab gaar ahaan xadka min Matabaan ilaa Dhuusamareeb. “Kama sugeyno abaaldhac iyo in maanta naloo adeegsado” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.